Is dilka ciidamada booliska oo qeylo dhaan laga muujiyay – The Voice of Northeastern Kenya
Is dilka ciidamada booliska oo qeylo dhaan laga muujiyay
Waxaa isasoo tareysa qeylo dhaan xoogan iyo walaac laga muujinayo soo badashada dhacdooyinka la xiriira is dilitaanka askarta ka tirsan ciidamada booliska ee dalka.
Daraasad cusub oo lasoo saaray ayaa muujisay in ay aad u bateen falalka la xiriira dadka naftooda dila ee ka dhaca deegaanna gobolka Nyanza, iyadoo in badan oo ka mid ah dadka dhacdooyinkaas ku dhintana ay yihiin shaqsiyaad ka tirsan ciidamada amaanka.
2 askari oo booliska ka tirsan ayaa ka mid ah 10 ruux oo muddo 1 bil gudeheed ah isku dishay magaalooyinka Kisumu, Homa Bay, Migori iyo Siaya.
Dhacdadii ugu naxdinta badneyd ayaa isbuuci lasoo dhaafay laga soo tabiyay naamul goboleedk Homa Bay halkaasoo haweeney aheyd askariyad ka tirsan booliska ay isku dishay kadib markii ay sidoo kale dishay 2 caruur ah oo ay dhashay oo ay da’dooda kala ahayd 5 jir iyo 2 jir.
Haweeneydaas oo lagu magacaabi jiray Judith Galland ayaa la sheegay in tallaabadaas ay u qaaday mushkilado dhinaca qoyska ah oo soo wajahay awgood.
Maalintii jimcada ahayd ee lasoo dhaafay ayaa sidoo kale lasoo tabiyay in askari kale oo booliska ka tirsanaa laguna magacaabi jiray Alfred Ndalanu uu isagana is dilay, walow ay laamaha amaanka hada wadaan baaritaanno la xiriira dhimashadiisa oo shaki laga muujiyay sababta keentay.
Khubarada ayaa sheegaya in dadka falalkaan ku nafwaaya ay u badanyihiin kuwo u adkeysan waayay dhibaatooyin la xiriira dhinaca shaqooyinka iyo arrimo kale oo xaga nolosha ah.
← Xildhibaanada baarlamaanka oo taageeray isbadal lagu sameeyo waxda wax barashada
Booliska oo Mombasa ku qabtay maandooriye →